8. Nissaya Paccaya | Dhamma Training Center
Jul 28 th, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence condition)PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence condition)...
Apr4th, 2020
၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence condition) PDF file
၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence condition) PDF file ၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence condition) PDF...
Apr 1 st, 2020
၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence condition) (1 of 8)
၁ – ကုသလတ္တိက ၇ – ပဥှာဝါရ ၁ – ပစ္စယာနုလောမ ၁ – ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence condition) Nissaya Paccaya Paccayaniddeso ...
၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence Condition) (2 of 8)
Nissayapaccayo Pañhāvāro Kusalo dhammo kusalassa dhammassa nissayapaccayena paccayo. Kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo. Tayo khandhā ekassa khandhassa nissayapaccayena paccayo. Dve khandhā...
၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence Condition) (3 of 8)
၈-နိဿယပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ ၄၂၁။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ တယော ခန္ဓာ ဧကဿ ခန္ဓဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။...
၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence Condition) (4 of 8)
၈-နိဿယပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာzawgyi ၄၂၁။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား နိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ကုသလော ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ...
၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence Condition) (5 of 8)
၈။ နိဿယပစ္စယော ဘ၀နှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ zawgyi ‘နိဿယ’ ဟူသော ပါဠိဝေါဟာရသည် ‘မှီရာ၊ တည်ရာ’ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ မှီရာတည်ရာ အဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်းသည် နိဿယပစ္စည်းမည်၏။ ဥပမာအားဖြင့် မြေကြီးသည် သစ်ပင်တို့အား မှီရာတည်ရာ အဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုသကဲ့သို့...
၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence Condition) (6 of 8)
၀တ္ထာရမ္မဏပုရေဇာတနိဿယ zawgyi အကြင်တရားသည် (၁) ၀တ္ထုလည်းဟုတ်၏= ၀တ္ထု၊ (၂) ပစ္စယုပ္ပန်တရားတို့၏ အာရုံလည်း ဟုတ်၏= အာရမ္မဏ၊ (၃) ပစ္စယုပ္ပန်တရားတို့ မဖြစ်မှီ ရှေးဦးစွာ ဖြစ်နှင့်သည်လည်း ဟုတ်၏= ပုရေဇာတ၊ (၄) နိဿယ သတ္တိဖြင့် အမှီခံရသည်လည်း...
၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence Condition) (7 of 8)
အရိယာနှင့် ပုထုဇဉ်အမြင်zawgyi “ဘုရား, ရဟန္တာတွေမှာ အာသ၀တွေ၊ တဏှာတွေ၊ ဥပါဒါန်တွေ ရှိသေးလားဆိုရင် မရှိတော့ဘူး။ မရှိရင် မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ အရိပ်ဟာ အရိပ်အတိုင်းပဲ သူတို့သဏ္ဍာန်မှာ အကောင်အနေနဲ့ မကျန်ခဲ့ဘူး။ မိမိတို့ ကျတော့ မြင်ရင်မြင်တဲ့နေရာကနေ အကောင်ဖြစ်တယ်။ ကြားရင် ကြားတဲ့နေရာကနေ...
၈ – နိဿယပစ္စယော Nissaya Paccayo (Dependence Condition) (8 of 8)
ရှုမှတ်ပုံ zawgyi အဲဒီတော့ ရှုရမယ့်၊ ကျင့်ရမယ့်ပုံစံအားဖြင့် မြင်မှုလေးဖြစ်လာတယ်၊ မြင်မှုဖြစ်လာရင် မျက်စိက ဘာကို မြင်ရလဲဆိုရင် အဆင်းကိုပဲမြင်ရမယ်။ အဆင်းကိုမြင်ရတော့၊ အဆင်းကိုမြင်ရင် မြင်မှန်းသိပါ။ အဆင်းကို အဆင်းမှန်းသိခြင်းသည်ပင် ဧည့်သည်ကို ဧည့်မခံခြင်းပဲ။ အဆင်းကို အဆင်းမှန်းသိတော့ လိုချင်မှု၊ မကျေနပ်မှုတွေ...